10 दिन स्विट्जरल्याण्ड यात्रा Itinerary | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 दिन स्विट्जरल्याण्ड यात्रा Itinerary
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 31/12/2019)
भावुक यात्री थाहा राम्रो यात्रा गर्न कसरी महत्त्वपूर्ण छ. नक्सा मा एक राम्रो नजर, एक ठोस यातायातका योजना, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण, सुन्दर गतिविधिहरु - तपाईं को लागि सेट हुनुहुन्छ आफ्नो 10 दिन स्विट्जरल्याण्ड यात्रा. र तपाईं को माध्यम यात्रा गर्दा युरोप, एक रेल तपाईं लगभग कहीं लाग्न सक्छ. देश भरिएको छ किनभने स्विट्जरल्याण्ड explorre गर्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूलाई एक योजना छ गर्न आवश्यक मनोरम ठाँउहरु. तपाईं आफ्नो साथ आ मद्दत वा प्रेरणा चाहिन्छ भने, का एक नजर गरौं 10 दिन स्विट्जरल्याण्ड यात्रा यात्रा:
दिन 1 तिम्रो 10 दिन स्विट्जरल्याण्ड यात्रा Itinerary – जेनेभा
ठाउँ जहाँ तपाईं तपाईंको यात्रा सुरु फरक हुनेछ, तर पनि आफ्नो रहन बाँकी लागि टोन सेट. सबैभन्दा यात्री या त जेनेभा वा ज्यूरिखको सुरु सिफारिस गर्छौँ किनभने ठूलो शहर यातायात हब हो. अरु के छ त, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ तपाईं यो यात्रा पछाडि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ - रमाइलो छ के महत्त्वपूर्ण!
तपाईं पहिलो जेनेभा मा भूमि यदि, त्यहाँ मा स्विट्जरल्याण्ड मा आफ्नो पहिलो दिन हेर्न कुराहरू एक भीड छ. हामी पुरानो टाउन र सिटी सेन्टर घुम्दै सिफारिस गर्छौँ. यसबाहेक, को TREILLE सैर र संयुक्त राष्ट्र सीट पनि छन् ठूलो ठाँउहरु.
लियोन बेसल गाडिहरु गर्न
पेरिस बेसल गाडिहरु गर्न
बेसल गाडिहरु गर्न ल्यूसर्न
दिन2– ताल जेनेभा
जेनेभा मा शुरू तपाईं एक सानो अब पोखरी जेनेभा वरिपरि रहन एक अद्वितीय मौका प्रदान गर्दछ. स्विट्जरल्याण्ड मा दोस्रो दिनको लागि, यो Montreux को शहर भ्रमण गर्न आदर्श हुनेछ, ताल नजिक Nestled.
यो केवल छोटो हो रेल सवारी टाढा जेनेभा देखि, र यो देखेर लायक छ. अरु के छ त, प्रेम गर्नेहरूलाई मध्ययुगीन महल Chateau de Chillon द्वारा रोमाञ्चित गरिनेछ, र प्रकृति प्रेमीहरूलाई पक्कै हुनेछ ताल आनन्द.
दिन3– जर्मेट – आल्प्स, स्विट्जरल्याण्ड
प्राकृतिक सौन्दर्य देखेर बिना स्विट्जरल्याण्ड मा समय व्यतीत आल्प्स एक जाँदै जस्तै हुनेछ शानदार रेस्टुरेन्ट र कुनै पनि खाना अर्डर छैन. र जब एउटा यो सम्झना गर्न कुनै कारण छ प्रारम्भिक बिहान रेल जर्मेट तपाईं लाग्न सक्छ. त्यहा बाट, आल्प्स मा आफ्नो साहसिक सुरु गर्न सक्नुहुन्छ.
त्यहाँ भने जर्मेट मा प्रशस्त छ मौसम पर्याप्त राम्रो छ. हामी पाँच पोखरी वरिपरि 3-घण्टा पदयात्रा सिफारिस, Blauherd मा सुरु. यो एक सुन्दर पदयात्रा र आफ्नो आल्प्स सुरु गर्न एउटा ठूलो तरिका हो अनुभव.
दिन4– जर्मेट – फेरि दिन मा4को 10 दिन स्विट्जरल्याण्ड यात्रा Itinerary
तपाईं पूर्णतया जर्मेट अन्वेषण गर्न आफ्नो चौथो दिन लाग्न सक्छ, यो ती आकर्षक स्विस को छ रूपमा mountainside सहर. त्यहाँ एउटा भव्य नदी हेर्न, र हेर्न Matterhorn. मामला मा तपाईं एक अनुभवी हुनुहुन्छ पदयात्री, यस हेर्न तपाईं दिउँसो लिन सक्छ चार्ल्स Kuonen झोलुङ्गे पुल.
त्यसको लागि, तपाईं Randa जान आवश्यक छ, जहाँ पुल गर्न पदयात्रा सुरु. यो एउटा2घण्टे पदयात्रा बारेमा पुल. यसलाई पूरा गर्न सजिलो निशान छैन, र पुल नै हृदयको बेहोश लागि छैन. तथापि, यो देखेर समस्या लायक छ.
बर्न गाडिहरु गर्न बेसल
पूरै आल्प्स अनुभव गर्न, तपाईं उच्च उँचाइमा मा प्राप्त गर्न मौका लिनुपर्छ. जर्मेट कि ठूलो विन्दु हो, रूपमा सजिलै त्यहाँ बाट Matterhorn ग्लेशियर प्रमोदवनमा र गर्नरग्राट दुवै पुग्न सक्छ.
यो Matterhorn शीर्ष पुग्न केही लिफ्टहरु लिन्छ हिमनदी प्रमोदवनमा वा गर्नरग्राट एक रेल सवारी. दुवै यी दिन यात्राको आल्प्स को शानदार दृश्यहरु प्रस्ताव, र त्यहाँ केही अन्वेषण तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्छ एक पटक गर्न, धेरै.
Chur गाडिहरु गर्न बेसल
Chur गाडिहरु गर्न बर्न
नाइस Tirano गाडिहरु गर्न
दिन6– Schilthorn स्विट्जरल्याण्ड
तपाईंको स्विट्जरल्याण्ड यात्रा को छैटौं दिनको लागि, यसलाई केही थप शानदार दृश्य फसाउन समय Schilthorn. Murren देखि Schilthorn र यो प्रस्ताव छ सबै रमाइलो गर्न एक केबल कार पकड. एक घुमाउँदा रेस्टुरेन्ट, हेर्ने मञ्चहरूमा प्रशस्त, र पनि बण्ड विश्व सबै यहाँ पाउन सकिन्छ.
Schilthorn सम्पूर्ण दिन भर्नका लागि पर्याप्त छ, तर तपाईं महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने adventurous, साथै बाहिर Lauterbrunnen जाँच. यो एक सुन्दर उपत्यका सानो गाउँमा रोक्दछ र mountainside झरने को दृश्यहरु पूर्ण मार्फत एक पदयात्रा छ.
दिन7को Jungfrau क्षेत्र आफ्नो यात्रा prolonging लागि पूर्ण हुन र आल्प्स अन्वेषण राख्न थियो. तपाईं Grindelwald देखि लिन सक्छ केही लोकप्रिय पैदल यात्रा ट्रेल्स छन्. एक केबल कार पहिलो पर्वतीय तपाईं लाग्न सक्छ, जहाँ तपाईं धेरै उपलब्ध पैदल यात्रा ट्रेल्स को एक छनोट गर्न सक्नुहुन्छ.
सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्तिहरूलाई एक पक्कै पनि छ Bachalpsee लेक पदयात्रा, जो कि वरिपरि लिन्छ एक राउन्ड यात्रा हो2घण्टा. तथापि, पहिलो अन्य गतिविधिहरूको प्रशस्त त्यहाँ, त्यसैले राम्रो क्षेत्र थाह प्राप्त गर्न निश्चित.
आफ्नो आठौं दिनको लागि आधार 10 दिन स्विट्जरल्याण्ड यात्रा अन्वेषण Wengen हुन सक्छ, एउटा सानो mountainside शहर. क्षेत्र हुँदा, तपाईं एक केबल कार अप पहाड को ट्रेल्स लिइरहेको र पैदल यात्रा गरेर Mannlichen अन्वेषण गर्न सक्छ. त्यहाँ केही intriguingly नाम हुन्छन्, रोयल हिंड्दा यस्ता.
Kleine Scheidegg गर्न परिदृश्य Mannlichen देखि ट्रेल शायद छ सबै भन्दा सुंदर एक. यसलाई प्रदान गर्दछ दृश्य को Jungfrau - तल बेसी र तीन प्रसिद्ध हिमालहरूको, Monch, र Eiger. Kleine Scheidegg देखि, एक रेल लिन फिर्ता Wengen गर्न.
दिन9– ल्यूसर्न
अन्त नजिक आफ्नो 10 दिन स्विट्जरल्याण्ड यात्रा Itinerary, तपाईं आफ्नो बाटो बनाउन चाहनुहुन्छ छौँ यस शहर मा फिर्ता. को 9th दिनको लागि, हामी ल्यूसर्न एउटा यात्रा सिफारिस, यो पैदल अन्वेषण गर्न सही शहर हो रूपमा. सबै पैदल यात्रा पछि, यसलाई घुम्ने को एक व्यवहार हुन जाँदै गर्नुपर्छ ठाँउहरु को खोज मा सडकमा सेन्ट को चर्च जस्तै. Leodegar, Museggmauer र सिंह स्मारक.
ल्यूसर्न ठूलो riverfront र सुन्दर स्थलहरू प्रशस्त छ. यसबाहेक, यो ज्यूरिख तपाईंको यात्रा मा ठूलो स्टप छ, जहाँ तपाईं समाप्त हुने छौं आफ्नो यात्रा.
दिन 10 – ज्यूरिख र हाम्रो अन्तिम दिन 10 दिन स्विट्जरल्याण्ड यात्रा Itinerary
आफ्नो अन्तिम दिन पूर्ण एक हुनुपर्छ, र ज्यूरिख मा खर्च गर्न एक आदर्श स्थान छ. यसको धेरै हेर्न समय प्रयोग ऐतिहासिक ठाँउहरु, जस्तै चर्च Grossmunster र Fraumunster को.
ज्यूरिख पनि यसको छ प्रसिद्ध किनमेल सडक प्रस्ताव गर्न, त्यसैले पक्का Bahnhofstrasse मा केहि किन्न बनाउन. पुरानो टाउन मार्फत हिंड्न र तपाईं घर फिर्ता टाउको अघि अन्वेषण आनन्द.
तपाईंले जे स्विट्जरल्याण्ड मा गर्न छनौट, तपाईं आफ्नो जीवन को समय जाँदैछन्. बस आफ्नो गतिविधिहरु योजना सम्झना, यातायात, र रुकने ध्यान. सुनिश्चित हुनेछ कि आफ्नो छुट्टी परेशानी-मुक्त र साँच्चै आराम छ, रूपमा हुनुपर्छ.
स्विट्जरल्याण्ड एउटा सुन्दर देश हरेक यात्री अनुभव गर्न आवश्यक छ. तपाईं एक लागि तयार छन् 10 दिन स्विट्जरल्याण्ड यात्रा? पुस्तक तपाईंको रेल टिकट अहिले र गरौं आफैलाई सौन्दर्य द्वारा दूर बह गर्न!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “10 दिन स्विट्जरल्याण्ड यात्रा Itinerary” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-days-switzerland-itinerary%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#traveleurope europetravel SwissAlps trainjourney रेल यात्रा यातायात स्विट्जरल्याण्ड